पुलिस शरीर लगाएका क्यामेराबाट फाइदा OMG समाधानहरू
पुलिस शरीर लगाएका क्यामेराका फाइदाहरू
दिन बित्दै जाँदा यस संसारको जनसंख्या बढ्दैछ। यसले टेक्नोलोजी र विज्ञानमा पनि तीव्र वृद्धि दिइरहेको छ। अब एक दिन, हामी हाम्रो वरिपरि धेरै उदात्त आविष्कारहरू देख्न सक्छौं। यी आविष्कारहरूले जीवनलाई सजिलो बनाउँदछन्। प्रमुख शहरको बढ्दो जनसंख्याको साथ, अपराधको दरमा निश्चित रूपमा ठूलो वृद्धि हुनेछ। शहर पुलिसले हरेक दिन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। उनीहरूको सहजताको लागि, विज्ञानले हामीलाई शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू दिएर मद्दत गरेको छ।
शरीरमा लगाएको क्यामेरा के हो?
शरीरमा लगाएको क्यामेरा भनेको नामले संकेत गर्दछ, क्यामेरा जुन व्यक्तिको शरीरमा लगाइन्छ। नतिजाको रूपमा, क्यामेराले त्यो विशिष्ट व्यक्तिको दैनिक जीवन रेकर्ड गर्दछ। यो अतिरिक्त आँखा भएको जस्तो छ। क्यामेरा मेटल बाकसमा फिट छ जुन यसमा ब्याट्री छ। ब्याट्री चार्ज योग्य छ। बक्स तब व्यक्तिको शरीरको अगाडि अनुहार पक्षमा जोडिन्छ। त्यसो भए त्यस व्यक्तिको दैनिक तालिका क्यामेरामा रेकर्ड गरिएको छ। क्यामेराले बनाएको रेकर्डिंग बक्समा संलग्न मेमोरी कार्डमा बचत गरिएको छ ताकि कुनै पनि समयमा रेकर्डिंग देख्न सकिन्छ।
शरीरमा लगाएको क्यामेरा किन प्रयोग गरिन्छ?
शारीरिक Worn क्यामेरा विज्ञान र प्रविधि को एक महान आविष्कार हो र ती हाम्रो जीवन हाम्रो लागि सजिलो बनाउँछ। यस क्यामेराको उपयोगमा एक नजर राखौं। शरीर कीरा क्यामेरा किन प्रयोग गरिन्छ? खैर, यी क्यामेराहरू विशेष रूपमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य समयमा प्रयोग गर्दछन्। पुलिस व्यक्तिहरू आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गर्दछ आफ्नो दैनिक काम रेकर्ड गर्न। किन तिनीहरू यो गर्छन्। एक पुलिसको जीवन जोखिम र चुनौतीहरूले भरिएको छ। उसले हरेक कदम ध्यान दिएर लिनु पर्छ। यो सक्रिय र तीब्र इन्द्रियको लागि मांग गर्दछ। त्यसोभए यदि हामी भन्छौ कि शरीरमा लगाएको क्यामेराले उसको दृश्यता बढाउँदछ? यो सत्य हो। क्यामेराले प्रहरीको दैनिक तालिका रेकर्ड गरेको रूपमा यो उसको लागि तेस्रो आँखाको रूपमा व्यवहार गर्दछ। त्यहाँ कहिलेकाँही केहि चीजहरू हुन्छन् जुन व्यक्तिले अवलोकन गर्दा याद गर्दैन। यी चीजहरू क्यामेराले कब्जा गरेको छ। र एक थपको रूपमा, यी रेकर्डि .हरू अनुसन्धान र अनुसन्धानको लागि उनीहरूले चाहे जति पटक खेल्न सकिन्छ।
शरीर लगाएका क्यामेराका लाभहरू:
बॉडी वर्न क्यामेराले पुलिसको दैनिक जीवनमा ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ। यदि हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौं, तब हामी यो उत्पादनमा धेरै विफलताहरू देख्न सक्दछौं तर सामान्यतया, शरीर कीरा क्यामेरा ठूलो सहयोग हो। प्रत्येक ग्याजेटमा केही फाइदाका साथै विपक्षहरू हुन्छन् तर हामी यो मान्दछौं कि यस ग्याजेटका फाइदाहरूको स number्ख्याको संख्याको तुलनामा बेफाइदाहरू छन्।
शरीरमा लगाएका क्यामेराका केहि फाइदाहरूमा द्रुत हेरौं:
पुलिस निकाय क्यामेरा जनता र पुलिसको सुरक्षा बृद्धि तिनीहरूलाई क्यामेरा को रूप मा अतिरिक्त तीक्ष्ण इन्द्रियहरु दिएर। मानिसहरु बिभिन्न तरिकाले कार्य गर्छन् जब तिनीहरु जान्दछन् कि उनी फिल्मिदै छन्। पुलिस निकाय क्यामेराले पुलिस अधिकारीहरू र जनताका सदस्यहरूको राम्रो व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दछन् जसले हिंसा कम गर्न, बल प्रयोग गर्ने घटनाहरूको प्रयोग गर्ने र कर्तव्यमा रहेका अधिकारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने गर्दछ। एक अध्ययनका अनुसार, यो पत्ता लाग्यो कि पुलिस अधिकारीहरूले शरीरको क्यामेरा लगाएको बेला बल प्रयोग गर्ने जम्मा संख्यामा 40% घटाइएको छ; अफिसरहरू विरुद्ध गुनासोहरू 30 बाट अध्ययनको वर्षमा3को वर्षमा खस्कियो। शरीरमा क्यामेरा राख्नु पुलिसका कामहरू पनि झल्काउँछ। त्यसकारण, प्रहरीहरू व्यवहार गर्न र उचित तरिकाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि क्यामेराले तिनीहरूलाई रेकर्ड गरिरहेको छ र यदि तिनीहरू खराब कुरा गर्छन् भने, तिनीहरू यसको लागि जिम्मेवार हुनेछन्।
यो जनताको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। तिनीहरू पनि व्यवहार गर्छन् र उनीहरूको पुलिसलाई सम्मान गर्दछ यदि उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू रेकर्ड भइरहेको छ र क्यामेराको अगाडि छन्।
झूटा आरोप हटाउने:
पुलिस निकाय क्यामेराले पुलिसको उत्तरदायित्व सुधार्छ र अधिकारीहरुलाई कुव्यवहारको झूटा आरोपहरु बाट जोगाउँदछ। पुलिस बडी क्यामेरा दृश्य र अडियो प्रमाण प्रदान गर्दछ जुन स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि परिस्थितिमा के भयो प्रमाणित गर्न सक्छ। टेक्सासको जस्तो उदाहरण लिनुहोस्, एक पुलिस अफिसरलाई निकाले र उनलाई हत्याको आरोप लगाइयो जब शरीरमा लगाएको क्यामेरा फुटेज देखा पर्‍यो जुन निशस्त्र युवाको गोलीबारीमा उनको प्रारम्भिक भनाइको विपरित थियो। यसले हामीलाई शरीरमा लगाएको क्यामेराको महत्त्व देखाउँदछ। हामी एक पुलिस अधिकारी को दैनिक जीवन मा धेरै ती उदाहरणहरु र परिदृश्यहरु देख्न सक्छौं जुन ती तीब्र इन्द्रियहरु लाई समावेश गर्दछ। तसर्थ, तिनीहरूसंग सब भन्दा उत्तम चीज भनेको शरीर लगाउने क्यामेरा हो। टेक्सासको एक्सएनयूएमएक्समा पनि यस्तै घटना भयो जसमा एक गलत आरोप लगाइएको पुलिसलाई मृत्युदण्ड सुनाईयो जुन शरीरमा लगाएको क्यामेराको फुटेज पछि रोकियो।
राम्रो शिक्षण उपकरण:
पुलिस बडी क्यामेरा सिक्न को लागी एक राम्रो उपकरण हो र जनता को सदस्यहरु का कडा समर्थन छ। पुलिस बडी क्यामेराबाट रेकर्ड गरिएको भिडियो नयाँ र अवस्थित अफिसरहरूलाई जनतासामु गाह्रो समयमा कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। मियामी पुलिस विभागले 2012 पछि प्रशिक्षणका लागि शरीर क्यामेरा प्रयोग गर्दै छ। यो नयाँ भर्ती गर्न एक उत्तम शिक्षा अवसर दिन्छ। तिनीहरूले आफ्ना वरिष्ठ व्यक्तिहरू अवस्थासँग सामना गर्दै र स्थिर रहेको देख्न सक्दछन्। यसले तिनीहरूलाई सिक्ने र प्रगति गर्ने अवसरहरू दिन्छ। यदि नयाँ अफिसरहरूले एनकाउन्टरको रेकर्डिings देख्यो भने तिनीहरू मानसिक रूपमा तयार हुन सक्छन्। यसले उनीहरूलाई ड्रिलको बखत फाइदा पनि दिन्छ उदाहरणका लागि वरिष्ठ सदस्यहरूले ड्रिल गर्न सक्छन् वा शरीरको क्यामेराको साथ उनीहरूको शरीरमा संलग्न पाठ्यक्रम। रूकीहरूले उनीहरूबाट सिक्न सक्छन् उनीहरूको रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू हेरेर तिनीहरूलाई सिक्नको लागि ठूलो अवसर दिनेछ।
एक निर्णायक स्तरमा, हामी भन्न सक्दछौं कि शरीर लगाउने क्यामेरा महान ग्याजेटहरू हुन् जुन धेरै उपयोगी उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस ग्याजेटको प्रयोगका थुप्रै बेफाइदाहरू पनि छन् तर यदि हामीले राम्ररी हेर्‍यौं भने, हामी बुझ्दछौं कि यसका अधिक फाईदाहरू छन् तब बेफाइदाहरूको स .्ख्या। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै धारणामा शरीरमा लगाइएको क्यामेरा उपयोगी ग्याजेटहरूको उदाहरण हो।
पुलिस शरीर लगाएका क्यामेराका फाइदाहरू पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: सेप्टेम्बर 26th, 2019 by व्यवस्थापक
3827 कुल दृश्यहरू4हेराइ आज